पूजा शर्माले खो’जिन् नयाँ हिरो, को होला त उनको हिरो ? हेर्नुहाेस् भिडीयाेमा । – Jagaran Nepal
पूजा शर्माले खो’जिन् नयाँ हिरो, को होला त उनको हिरो ? हेर्नुहाेस् भिडीयाेमा ।
अभिनेत्री पूजा शर्मालाई निर्देशक शुदर्शन थापा निक्कै फा’पेको छ भन्दा फरक पर्दैन । जव जव शुदर्शनको साथ पूजाले पाईन् तव उनले सफलता पाउन था’लिन् भन्दा फरक पर्दैन । लामो समय देखी पूजाले सुदर्शनको साथमा थुप्रै सहकार्य गरेकी छिन् ।उनीहरूले मि’लेर फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु, रामक’हानी, म यस्तो गीत गाउँछु २’ ब’नाइसकेका छन् । फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ निर्माण गरेर रिलिजको लागि तयार भइसकेको थियो । तर, कोरोना सं’क्रमण ब’ढेसँगै नेपालमा जारी ल’क’डाउनका कारण फिल्म रिलिज हुन पाएन ।
यही ल’क’डाउनका बिच सुदर्शन र पूजाले नयाँ फिल्मको निर्माण गर्ने तयारी था’लेका छन् । स्रोतका अनुसार उक्त फिल्म को’रोनाको कथामा निर्माण गरिनेछ । प्रेमकथालाई को’रोनाको कथासँग जोडे’र उक्त फिल्म निर्माण हुनेछ ।यसैबीच, यो टिमले नयाँ अनुहारको खोजी थालेको छ । फिल्ममा नयाँ नायकलाई अनुबन्धित गर्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ । अडिसनको माध्यमबाट नयाँ नायक चयन गरिनेछ ।’
पूजा र सुदर्शनको टिमले फिल्म क्षेत्रमा केही राम्रो कलाकार भि’त्र्याइसकेको छ । यो टिमसँग सहकार्य गरेर प्रदीप खड्का, पल शाह, आकाश श्रेष्ठजस्ता कलाकार चर्चित छन् । अब डे’ब्यु गर्ने अभिनेता पनि नेपाली फिल्म बजारमा सफल हनुे आश राखम । हेर्नुहाेस् भिडीयाेमा